OMasipala bazilahle kuPillay ngezindlu zomxhaso – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/OMasipala bazilahle kuPillay ngezindlu zomxhaso
UMhlonishwa uRavi Pillay
ZIYAWUSOLA umgqakazo ngokukhishwa kwamathenda okwakha izindlu zesibonelelo komasipala baKwaZulu-Natal. Osekuvelile wukuthi balahle imiqulu esuke ichaza kabanzi ngokuqokwa kwezinkampani ezithile nosekudale ukuba uMnyango Wezokuhlaliswa Komphakathi ugcine usuthatha isinqumo sokumisa ukukhokhela osonkontileka abathintekayo. Bali-12 oMasipala abathintekayo esifundazweni.
Lokhu kungemuva kokuthi oMasipala abathintekayo behluleke bancama ukuletha imininingwane ethinta ukuqokwa kwezinkampani ukuze ziqale umsebenzi wokwakhela abantu izindlu.
Ngeledlule uMnyango Wezokuhlaliswa Komphakathi kudingeke ukuba uvele phambi kwekomidi elibhekele ukusetshenziswa kwezimali zomphakathi, iScopa, eSishayamthetho KwaZulu-Natal ukuze uchaze kabanzi ngalolu daba.
Ngaphandle kwalokho abanye omasipala sebeze babhalela uMphathiswa Wezokuhlaliswa Komphakathi esifundazweni uMnu uRavi Pillay, bemncenga ukuba abathethelele kulesi simo ababhekene naso sokudukelwa imiqulu equkethe imininingwane yokwakhiwa kwezindlu.
Kwenye incwadi ebonwe elaboHlanga ebhalelwe uMphathiswa uPillay, uMasipala iNkandla ubuzicelela ukuba kungamiswa ukwakhiwa kwezindlu esezivele seziqaliwe.
“Mphathiswa uPillay ngiphendula incwadi yakho osibhalele yona mhla zili-11 kuZibandlela wezi-2017 mayelana nemininingwane okufanele siyinikeze uMnyango wakho ngohlelo lokwakhiwa kwezindlu zesibonelelo. Sifisa ukuqinisekisa ukuthi sinalo uhlelo lokwakhela abantu izindlu okumanje kukhona ingxenye yalo esiphothuliwe. Kwezinye izindawo kusaqala ukwakhiwa kanti kwezinye kusahlelwa ukuthi kuzoma kanjani. Nokho esifisa kucace ukuthi imininingwane emayelana nalezi zinhlelo isidukele. SinguMasipala siyaqonda ukuthi uMnyango wakho usebenza ngokuzikhandla ukugwema ukuxhashazwa noma ukusebenza ngokungahlelekile kwemali yabakhokhintela. Noma kunjalo kodwa besicela ukuba lezi zinhlelo eseziqaliwe kuMasipala wethu zingabe zisamiswa nokuthi ukukhokhelwa kwazo kungavalwa. Isizathu ukuthi uma kugcina kwenzeke njalo kuzolimala abantu abaningi abadinga lezi zindlu nabaswele. Izinhlaka eziselekelela kulo msebenzi walolu hlelo ziyaziwa futhi zinamagalelo ahlonishwayo ngoba ngisho neHhovisi lenu lesiFunda elisOlundi banalo ulwazi ngazo njengoba sihlale sibika emihlanganweni ebakhona. SinguMasipala siyazibophezela ekutheni sizokwenza isiqiniseko sokuthi siba nomuntu okunguye ozobhekana ngqo nokugcinwa kwemiqulu ethinta lolu hlelo ukuze sigweme lesi simo sokuduka kwayo,” kusho uMnu uThami Ntuli oyiMeya encwadini ayibhalele uMphathiswa uPillay.
Umthombo ongaphakathi kuScopa uhlebele elaboHlanga ukuthi isizathu esenza kufuneke imininingwane ethinta nokuqokwa kwezinkampani ezakhela abantu izindlu komasipala, kube ukuthi kukhona okubonakala kushaya amanzi.
“Inkinga ekhona ukuthi komasipala abaningi kuba nokugxambukela okuningi okuvela emaqenjini ezombusazwe asuke ephethe. Akwenza lokhu ngoba efuna ukuhlomula emalini yaleyo thenda ukuze akwazi ukubhekana nemisebenzi efana neyokhetho nokunye. Ngaleyo ndlela kuba inkampani esuke isithole umsebenzi kulowo masipala eyalelwa iqembu ukuba kuzomele emalini yethenda ekhokhelwe yona ilinikeza ingxenye ethile. Lokho kugcina kushaya umnikazi womsebenzi ngoba usuke engeke esakwazi ukwenza umsebenzi waleyo mali akhokhelwe yona futhi nokuqokwa kwakhe kusuke kunezinto eziningi ezishayisa amakhala. Inkinga ihlala obala uma uMcwaningimabhuku esephenya amabhuku athintana nalowo msebenzi. Yingakho kubenezinsolo zokuthi kungenzeka ukuthi imiqulu lena ethinta izinhlelo zokwakhiwa kwezindlu ilahlwe ngamabomu ukuze kufihlwe amahlazo,” kusho uMthombo ocele ukuba ungadalulwa.
Okhulumela uMnyango Wezokuhlaliswa Komphakathi KwaZulu-Natal, uMnu uMbulelo Baloyi uthe le nkinga ayikhungethe iNkandla kuphela kodwa baningi omasipala abathintekayo, abababhalele izincwadi ekuqaleni konyaka odlule babanika izinyanga ezithile ukuba balethe yonke imininingwane abathi idukile.
“Cishe uhlelo selulonke oluthintekayo lubiza imali eyizigidigidi ezimbili zamarandi (R2 billion). Ngakho sithathe isinqumo sokuba labo masipala abaqhubekayo nokwehluleka ukusinikeza imininingwane yokuqokwa kwezinkampani ezakhayo siyakumisa ukuzikhokhela. Kwabanye omasipala sesivele sikumisile ngoba nathi sinenkinga manje yokuthi uMcwaningimabhuku Jikelele uyasithela isibhaxu kithi njengesifundazwe. Ufuna yonke le miqulu omasipala abangasinikezanga yona ngoba ebona ukuthi siyawakhokhela impela ama- invoyisi kodwa akukho okukhombisa ukuthi sikhokha ngasiphi isizathu. Yingakho sigcine sesikhipha umyalelo wokuthi abasinikeze wona ngoba asikwazi ukuqhubeka sikhokhe bengasinikanga. Ngaphandle kwalokho sesisizwa ukuthi uma uMcwaningimabhuku Jikelele efuna ubufakazi bomsebenzi esiwukhokhelayto siyakwazi ukuya ezindaweni simkhombise lezi zindlu ukuthi nazi zikhona,” kusho uBaloyi.
Uthe le nkinga ikulabo masipala abazibambela bona mathupha uhlelo lokwakhiwa kwezindlu nokuqoka izinkampani okufanele zinikezwe ithenda.
Uqhube wathi uma kuyibo njengoMnyango ababaphambili kulolu hlelo njengokuthi baqashe inkampani esuke izokwakha nokunye, izinto zibalula ngoba akukho okulahlekayo.
Ngenxa yalokhu uthe sebefuna ukuthi kubona bonke omasipala esifundazweni kube uMnyango owenza konke ukuze kugwemeke ukuqashwa kwezinkampani ezisuke zingaqondakali kahle noma ezinomlando wokwehlulwa umsebenzi.
Okhulumela uMasipala iNkandla, uMnu uMgcobeni Khanyile uthe abazange bakwazi ukuthola imininingwane edingwa uMnyango ngenxa yokuthi ababeqondene nayo abasekho eMkhandlwini.
“Empeleni iMeya igcine isibhala incwadi izama ukuchazela uMphathiswa uPillay ukuthi asiwatholi la madokodo adingekayo aqukethe imininingwane yokwakhiwa kwezindlu eNkandla. Isizathu esokuthi ubuholi obabuqondene nalolu hlelo akusekho noyedwa wabo lapha ngaphakathi. Akugcini lapho kodwa le mininingwane edingekayo eyentuthuko yezindlu eyenzeka lobu buholi obukhona njengamanje bungakangeni emandleni,” kusho uKhanyile.
Uthe yize kunjalo kodwa bayaqhubeka bona nezinhlelo zamanje zokwakhela abantu izindlu.
Uqhube wathi kumanje uMasipala uphothule uhlelo lokwakhiwa kwezindlu esigodini saseMaChunwini nakwaMagwaza. Uthe sekusele kwaGodide nakwaNgono.
Uveze ukuthi yizo lezi zinhlelo ababike ngazo kuMphathiswa uPillay, bemcacisela ukuthi akukho okunye abanakho ngaphandle kwale miqulu eqondene nalezi zindlu asebezibalile.
IMeya ithi iNkandla ifanelwe ngokugcono